ငွေလမင်း: မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် သမ္မတကြီး ဒေါက်တာ ဦးဘဦး
Posted by ငွေလမင်း at 10:37 PM
ငွေလမင်းဘလော့ကတော့ တကယ့် သမိုင်းစာကြည့်တိုက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ လေ့လာချင်စရာ ဖတ်ထိုက်တာတွေ ချည်းပဲ။
အော်....ဒေါက်တာဘမော်အကို ဆရာစံကို ကြိုးပေးခဲ့တဲ့
စက်ရှင်တရားသူကြီး ဦးဘဦး နဲ့ သမတကြီးဦးဘဦး နဲ့က
ဒီကစောင့်နေသူ. . . အိုး. . .
ဒီက စောင့်နေသူ . . . .
မဒမ်ဇော်ရဲ့ အဟိန်းအဟောက်ကို လုံးဝမခံရသော ကိုဇော်
( ရှိမှ ရှိဘဲနဲ့ )
နောင်တက်လာမဲ့ သမ္မတတွေကိုလည်း ပညာတတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်
ဒါမှ အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်မယ်.. နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ မနိမ့်ကျတဲ့ တန်းတူညီမှုမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံခံရစေချင်တယ်.. နိုင်ငံအလယ်မှာ သမ္မတချင်း ယှဉ်လိုက်ရင် ကိုယ့်သမ္မတဟာ ပညာတတ် ဗဟုသုတကြွယ်ဝ ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ သမ္မတမျိုး အလိုရှိပါတယ်ပြောရင် လွန်မလား ...
ညီမ မသိခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတ သမိုင်းကြောင်းလေးတွေ
သမိုင်း စာအုပ်စဉ်ကိုတွေ့လိုက်ရသလိုပါဘဲ ငွေလမင်းရေ...။
အခုမှ ရောက်ဖူးပါတယ်။ စာရေးကောင်းသလို ကျွန်တော် မဖတ်ဖူးတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာသမိုင်း တချို့ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ ဆက်လက်ရေးသားနိူင်ပါစေ။ မဒမ် ဗိုက်ခေါက်ဆွဲလိမ် ခံရအောင် မြှောက်ပေးသွား၏။ :P
မြန်မာပြည်က အင်္ဂလိပ်ခောတ် လူထု လူနေမှုလေးတွေလဲ ရှိရင် တင်ပေးဦးနော်
သူတို့ ရဲ အတွေးအခေါ်လေးတွေ သိခြင်တယ်
One of the Excellent post ဟူသည်မှ လွဲ၍ အခြားမှတ်ချက် မရှိပြီ။
ခုမှဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် သေသေချာချာ ဖတ်သွား ပါတယ်ဗျာ။ စာဖတ်သူကို တခုခုရစေချင်စိတ်နဲ့ ရေးထားမှန်း သိလို့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
his house in golden velly (formerly rent to german embassy) was sold to General than Shwe family several months ago with3million $.